ဘာနေဗျူးကွင်းကို ခြေချခွင့်ရဖို့ ဟာဇက်ထက် ကော်တိုအာ ပိုနီးစပ်နေပြီ
Hazard ကို လက်လျှော့ပြီး Courtois ကိုသာ အာရုံစိုက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေတဲ့ ရီးယဲလ်
29 Jul 2018 . 6:51 PM
လာလီဂါထိပ်သီး ရီးယဲလ် Real Madrid အသင်းဟာ ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး Chelsea တောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard ကို လက်လျှော့ပြီး ဂိုးသမား ကော်တိုအာ Courtois ကိုပဲ အဓိက ပစ်မှတ်ထား ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေပါပြီ။ ရီးယဲလ်အသင်းက သူတို့ရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထိပ်သီးကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ ပြန်အစားထိုးဖို့ စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီး ဟာဇက်ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဟာဇက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲရင် သူပြောင်းရွှေ့မယ့်အသင်းက ရီးယဲလ်လို့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ဟာဇက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့လက်လွှတ်လိုခြင်းမရှိဘဲ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း(၂၀၀)နီးပါးအထိရမှ ရောင်းချမယ်လို့ လေသံပစ်ခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းက ဟာဇက်ကို လက်လျှော့ပြီး ဂိုးသမား ကော်တိုအာ Courtois ကိုပဲ အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသက်(၂၇)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဟာဇက်ဟာ လာမယ့်နှစ်တွေဆိုရင် သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက ထက်ဝက်လောက်အထိ ကျဆင်းသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းက ဟာဇက်အတွက် ငွေအများကြီး အသုံးပြုရမှာကို လက်တွန့်နေပုံပါပဲ။ စပိန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလည်း ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြ လိုပယ်တက်ဂီ Lopetegui ဟာ အစ္စကို Isco ကို နေရာပိုပေးသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့် ဟာဇက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က မသေချာဘဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
အခုဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး ဟာဇက်ထက် ကော်တိုအာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ကော်တိုအာနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတို့ အပြောင်းအရွှေ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့တောင် သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်။ ကော်တိုအာဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ (၁)နှစ်စာချုပ်သာကျန်ရှိတော့ပြီး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမယ့်အနေအထားမရှိလို့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကလည်း သူ့နေရာမှာ အစားထိုးမယ့် ဂိုးသမားတစ်ဦးရရင် ရီးယဲလ်အသင်းဆီရောင်းချသွားဖို့ ရှိနေတယ်။ ကဲ ..ပရိသတ်ကြီးရေ ..လာမယ့်ရာသီသစ်ကျရင် ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဘာနေဗျူးကွင်းကို ခြေချနိုင်မယ့်သူက ကော်တိုအာဖြစ်လာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
Hazard ကို လကျလြှော့ပွီး Courtois ကိုသာ အာရုံစိုကျကွိုးပမျးသှားဖို့ရှိနတေဲ့ ရီးယဲလျ
လာလီဂါထိပျသီး ရီးယဲလျ Real Madrid အသငျးဟာ ကာလရှညျပဈမှတျထားနတေဲ့ ခယျြလျဆီး Chelsea တောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Hazard ကို လကျလြှော့ပွီး ဂိုးသမား ကျောတိုအာ Courtois ကိုပဲ အဓိက ပဈမှတျထား ကွိုးပမျးသှားဖို့ရှိနပေါပွီ။ ရီးယဲလျအသငျးက သူတို့ရဲ့ အဓိက တိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ထိပျသီးကစားသမားတဈဦးနဲ့ ပွနျအစားထိုးဖို့ စီစဉျနတောဖွဈပွီး ဟာဇကျကို ချေါယူဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။ ဟာဇကျကိုယျတိုငျကလညျး ရီးယဲလျအသငျးဆီ ပွောငျးရှဖေို့ ဆန်ဒရှိခဲ့ပွီး ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ လမျးခှဲရငျ သူပွောငျးရှမေ့ယျ့အသငျးက ရီးယဲလျလို့ ဖှငျ့ဟဝနျခံခဲ့ဖူးတယျ။
ဒါပမေဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးက ဟာဇကျကို လှယျလှယျနဲ့လကျလှတျလိုခွငျးမရှိဘဲ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး(၂၀၀)နီးပါးအထိရမှ ရောငျးခမြယျလို့ လသေံပဈခဲ့တာကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးက ဟာဇကျကို လကျလြှော့ပွီး ဂိုးသမား ကျောတိုအာ Courtois ကိုပဲ အာရုံစိုကျ ကွိုးပမျးသှားဖို့ ပွငျဆငျနတောပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အသကျ(၂၇)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဟာဇကျဟာ လာမယျ့နှဈတှဆေိုရငျ သူ့ရဲ့တနျဖိုးက ထကျဝကျလောကျအထိ ကဆြငျးသှားဖို့ရှိနတောကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးက ဟာဇကျအတှကျ ငှအေမြားကွီး အသုံးပွုရမှာကို လကျတှနျ့နပေုံပါပဲ။ စပိနျမီဒီယာတှရေဲ့ဖျောပွခကျြအရလညျး ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွ လိုပယျတကျဂီ Lopetegui ဟာ အစ်စကို Isco ကို နရောပိုပေးသှားဖို့ရှိနတောကွောငျ့ ဟာဇကျရဲ့အပွောငျးအရှကေ့ မသခြောဘဲဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ။
အခုဖွဈနိုငျခွအေရှိဆုံး ဟာဇကျထကျ ကျောတိုအာရဲ့အပွောငျးအရှဖွေ့ဈနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ကျောတိုအာနဲ့ ရီးယဲလျအသငျးတို့ အပွောငျးအရှေ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပွီလို့တောငျ သတငျးတှထှေကျခဲ့တယျ။ ကျောတိုအာဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ (၁)နှဈစာခြုပျသာကနျြရှိတော့ပွီး စာခြုပျသကျတမျးတိုးမယျ့အနအေထားမရှိလို့ ခယျြလျဆီးအသငျးကလညျး သူ့နရောမှာ အစားထိုးမယျ့ ဂိုးသမားတဈဦးရရငျ ရီးယဲလျအသငျးဆီရောငျးခသြှားဖို့ ရှိနတေယျ။ ကဲ ..ပရိသတျကွီးရေ ..လာမယျ့ရာသီသဈကရြငျ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဘာနဗြေူးကှငျးကို ခွခေနြိုငျမယျ့သူက ကျောတိုအာဖွဈလာမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .